तलब के हो? तलब र ज्याला बारेमा जानकारी | USAHello
तलब के हो? यो भनेर काम को लागि प्राप्त भुक्तानी छ. भुक्तानी एक महिना वा एक वर्षको लागि एक स्थिर रकम छ. पत्ता तपाईं तलब र ज्याला संग भुक्तानी बारेमा जान्नु आवश्यक छ के.
केही जब एक घन्टा वा साप्ताहिक दर. दर तपाईं एक घण्टा भुक्तानी प्राप्त डलर मा रकम अर्थ, एक दिन, वा एक हप्ता.
अन्य जब तपाईं वार्षिक बताउन (वार्षिक) दर, वा तलब. तपाईं एक वर्षको लागि एक सेट रकम कमाउन. सामान्यतया, वार्षिक तलब संग काम हरेक दुई हप्ता को अन्त वा तपाईं काम हरेक महिना मा भुक्तानी हुनेछ. तपाईं एक वर्षको लागि रहन यदि paychecks वार्षिक तलब सम्म थप्नेछ.
एक ज्याला एक तलब फरक कस्तो छ?
A wage is payment by the hour. एक घन्टा दर तपाईं काम प्रत्येक घण्टा एक सेट रकम कमाउन अर्थ. This is often called “wages.”
त्यहाँ जहाँ तपाईं प्रत्येक काम खत्म लागि भुक्तानी प्राप्त जब अन्य प्रकारका छन्. जस्तै, तपाईं कमाउन सक्छ $50 तपाईं लेख्न प्रत्येक लेख को लागि.
म मेरो तलब कसरी थाह?
तपाईं नयाँ काम प्रस्ताव गर्दा, तपाईं आफ्नो भुक्तानी सिक्न हुनेछ. को कर्मचारी तपाईंले भुक्तानी गरिनेछ कति तपाईं भन्नेछु तपाईं काम स्वीकार गर्ने निर्णय अघि. वा, तपाईं कम्पनी मा सोध्न वा तपाईंलाई थाहा छ कि मान्छे अनुरोध गर्न सक्छ. तपाईं के हेर्न जाँच गर्न सक्नुहुन्छ औसत तलब आफ्नो काम र शहर छ. तपाईं पनि गर्न सक्छन् न्यूनतम ज्याला आवश्यकताहरु सिक्न प्रत्येक राज्य मा.
के वेतन परिवर्तन?
कहिलेकाहीं, पूर्ण-समय वा भाग-समय काम तपाईं साथै अन्य लाभ आफ्नो तलब प्रस्ताव गर्नेछ. तिर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण छ, तर यो अन्य कुराहरू सोच्न पनि महत्त्वपूर्ण छ, धेरै. कहिलेकाहीं, यदि फरक लाभ छन् उच्च तलब तल्लो भुक्तानी भन्दा झन् खराब हुन सक्छ.
अन्य लाभ समावेश:
स्वास्थ्य बिमा: एक काम आफ्नो वा आफ्नो परिवारको लागि स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी मदत गर्न सक्छ.
अवकाश योजना: जागिर तपाईं अवकाश लागि पैसा बचत गर्न सहयोग सक्छ. तपाईं आफ्नो पे चेक को केही अवकाश खातामा बचत गर्न सक्नुहुन्छ. केही कम्पनीहरु योगदान, वा थप्न, आफ्नो बचत अवकाश खाता.
छुट्टी र अवकाश वेतन: केही जब छुट्टी भुक्तानी प्रदान, बिरामी दिन, र बिदा. यी लाभ धेरै भिन्न. तपाईंले भुक्तानी दिन बन्द कमाउन भने आफ्नो नियोक्ता सोध्न. अन्य जब तपाईं यदि तपाईं बिदा काम प्रति घण्टा थप भुक्तानी सक्छ.
2. कौशल र शिक्षा
यदि काम थप सीप वा उन्नत डिग्री आवश्यक, को तलब सामान्यतया उच्च छ.
काम लागि माग पनि भुक्तानी असर गर्न सक्छ. यदि त्यहाँ खुला जब धेरै छन्, र कम्पनीहरु समस्या कसैले राखने छ, को तलब उच्च हुन सक्छ. यदि काम खोजिरहेको मान्छे धेरै छन्, त्यसपछि तलब कम हुनेछ.
तपाईंको स्थान तलब परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. केही शहर र अमेरिका बस्न अधिक महंगा छन्. ती शहर र राज्य थप भुक्तानी हुन सक्छ. बस्न केही शहर र राज्य सस्ता छन्. ती शहर र अमेरिका कम तिर्न सक्छ. तपाईं भाडामा धेरै तिर्न गर्छन् किनभने, खाना, र अन्य कुराहरू, दुई राज्य बीच फरक तलब तिनीहरूले हेर्न भन्दा बढी बराबर हुन सक्छ.
काम आफ्नो अधिकार